Banyere Anyị - Ningbo ZKLS
Ningbo ZKLS. IMP. & EXP. CO., LTD nwere afọ iri abụọ na ahụmahụ na trade.our ọrụ dị na mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo, Ningbo, zhejiang, china.our isi na ngwaahịa ndị: Tote, ubu, sportbag, ịchọ mma akpa oyi akpa, ịsa akpa, mama akpa, njem akpa na ndị ọzọ na akpa ihe na Anyị bụ ndị a Nchikota mmepụta na ahia ụlọ ọrụ. Na Professional ọrụ, oge a na ngwá na nzukọ akara, anyị na-enye ndị ahịa anyị ezi mma ngwaahịa na asọmpi price. Ngwaahịa anyị na-agbaso ụkpụrụ ogo mba ụwa, gụnyere FDA, CE / EU. Anyị na-ewepụtara na-emepe emepe na emebe ọzọ ọhụrụ fashionable ngwaahịa maka ahịa anyị.In mgbalị nke anyị na-eto eto, omiiko, ọkachamara otu na afọ nke mmepe, anyị na-exported anyị ngwaahịa ọtụtụ mba: South Europe, North America, Central America, Africa , South America, Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, Western Europe. Ngwaahịa anyị na-ewu ewu ma nwee ntụkwasị obi nke ndị ahịa anyị. Anyị na-eme nyocha nlezianya dị mma karịa ụdị / ngwaahịa ọ bụla iji debe usoro njikwa njikwa mma. Anyị nwere ike izute dị iche iche chọrọ na ụkpụrụ si dị iche iche nke ndị ahịa. Companylọ ọrụ anyị kwadoro nkà ihe ọmụma "Ọdịmma Dị Elu na Mpi", na-enye ndị ahịa ogo na oke nke ụdị ngwaahịa dị iche iche yana ọ dị mma mgbe ọrụ ahịa gasịrị. Anyị ụlọ ọrụ ga-mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ime ihe na otu ebe mmepe nke ụlọọrụ akụ na ụba, ezi obi na-achọ mmekọ, ezi okwukwe nkwado na-achọ nkịtị development, na-ede a ọhụrụ isi na elu-tech electronicsWe ji obi ụtọ na ezi obi na-anabata ndị enyi na ndị ahịa n'ụwa nile ileta anyị ma kpaa nkata ma ọ bụ ịkekọrịta ọbụbụenyi ahụ.
Anyị na ngwaahịa ime na mba àgwà ụkpụrụ, gụnyere FDA,, OA / EU. Anyị na-ewepụtara na-emepe emepe na-emebe ihe ọhụrụ fashionable ngwaahịa maka anyị customers.We eduzi echesinụ quality inspections n'elu bụla ogbe / ngwaahịa na-àgwà akara usoro. Anyị ụlọ ọrụ na-akwado "High Ogo na Mpi Ahịa" nkà ihe ọmụma, na-enye ndị ahịa na àgwà na nke ukwu nke iche iche nke ngwaahịa na mma mgbe ahịa ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ ga na-agbasa n'ọtụtụ ọrụ na otu ebe mmepe nke ụlọọrụ akụ na ụba, ezi obi na-achọ mmekọ, ezi okwukwe imekọ ihe ọnụ ma na-achọ nkịtị mmepe, na-ede a ọhụrụ isi na elu-tech ngwá electronic.
Anyị n'anabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa si n'agbụrụ dị iche iche na kpọtụrụ anyị ga-eme n'ọdịnihu ahịa mmekọrịta na ọbọ ibe ịga nke ọma!
PU ịzụ ahịa akpa , akpa kwa ụbọchị, akpa ịzụ ahịa, isi awọ Pu Pu akpa , pink Pu ịzụ ahịa akpa , acha ọcha Pu ahịa akpa ,